Jitsi na Desktọpụ: Oku Na-emeghe Video na Ihe Nkata | Site na Linux
Jitsi na Desktọpụ: Oku Open Video na Egwuregwu Ngwa
Kemgbe a afọ 2020, abụwo otu afọ n'ime videoconferences na-ewu ewu dị ka a N'ihi nke Ọgbaghara covid-19 na mmetụta ya nke iche na nkewapu mmadu, ọtụtụ ngwa (ngwa ọdịnala) na nyiwe weebụ ọhụrụ ka emepụtara iji ohere ahụ wee rite uru na ndị ọzọ dị ugbu a ka emelitere ma mepee, otu n'ime ha bụ Jitsi na Desktọpụ.
Cheta nke ahụ Jitsi dị ka a dum, ọ bụ ihe set nke oru mmeghe na ikwado mmejuputa iwu-nke video conferencing ngwọta mma, anụ na uzo. Bụ ọrụ ya kachasị ewu ewu, Jitsi videobridge y Jitsi Zute, nke na-elekwasị anya na mkparịta ụka vidiyo na ịntanetị, ebe, Jitsi na Desktọpụ bụ omenala na nke bụ isi ahịa ngwa (desktọọpụ) nke Jitsi oru ngo.
Nke a na post abụghị nke mbụ, na ma ọ bụ metụtara Jitsi, ma ọ ga-enyere anyị aka ịmalite imelite ọdịnaya nke ya. Agbanyeghị, maka ndị nwere mmasị Ngwa Jitsi ma ọ bụ metụtara nkà na ụzụ ha, ị nwere ike ịga leta ha ma nyochaa ntakịrị ihe banyere ha. Ndị a bụ ihe ndị a:
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 5.25 na-abịa na ntinye maka Jitsi, ndozi maka Welcomebot na ndị ọzọ
Jitsi 1.0 anụ dị!
"Jitsi (onye a na-akpọ SIP Communication) bụ ọgbakọ mkparịta ụka vidiyo, VoIP na ngwa ngwa ngwa ngwa maka Windows, Linux na Mac OS X. Ọ dakọtara na usoro ọgbụgba ekwentị na-ewu ewu na ozi ngwangwa ozugbo wee ruo ụdị nke mbụ ya kwụrụ ụbọchị ole na ole gara aga. Kesaa n'okpuru usoro nke GNU Lesser General Public License, Jitsi bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ." Jitsi 1.0 anụ dị!
1 Jitsi na Desktọpụ: Oku vidiyo na ndị ahịa na-akparịta ụka
1.1 Gịnị bụ Jitsi Desktop?
1.3 Ntinye na Linux
Jitsi na Desktọpụ: Oku vidiyo na ndị ahịa na-akparịta ụka
Gịnị bụ Jitsi Desktop?
Taa, nkọwa ziri ezi na nke oge a banyere Jitsi na Desktọpụ Ọ bụ dị ka ndị a:
"Bụ Un free, oghe isi, multiplatform ahịa na-arụ ọrụ na Nzi ozi (IM), olu na video nkata na ịntanetị. Ọ na-arụ ọrụ na ọtụtụ usoro mgbasa ozi ịntanetị na Telephony kachasị ewu ewu na nke a na-ejikarị, gụnyere Jabber / XMPP na SIP Voice over IP (VoIP) protocol, n'etiti ndị ọzọ. Ọ na-arụ ọrụ na nzuzo nzuzo ọzọ maka IM site na OTR (Off-the-Record) na maka olu na nnọkọ vidiyo site na ZRTP na SRTP." Nkwurịta okwu: nyiwe maka GNU / Linux Operating Systems.
Ka ọ dịgodị, na ya ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, kọwaa ya dịka ngwa nke:
Ọ na - enye gị ohere ịme oku vidiyo echekwara, nzukọ, nkata, nkesa desktọọpụ, nyefe faịlụ, nkwado maka sistemụ arụmọrụ kachasị amasị gị na netwọkụ izi ozi ozigbo.
Mee oku vidiyo na oku di egwu, n'ihi usoro ezoro ezo ya na usoro abuo.
Kekọrịta desktọọpụ nke sistemụ arụmọrụ ọ bụla ebe arụnyere ya, ọ bụrụhaala na onye nnata nwere onye ahịa XMPP ma ọ bụ SIP nwere ikike vidiyo. Na mgbakwunye, ọ na - enye ndị ọrụ Jitsi ndị ọzọ ohere ịmekọrịta na ngwa nke onye isi nnabata n'agbanyeghị ụdị sistemụ arụmọrụ nke isi abụọ. You nwere ike ime nnọkọ dị otú ahụ ezoro ezo na ZRTP.
Dịka anyị kwuburu na mbụ, ọ bụ multiplatform, yabụ, Jitsi na Desktọpụ enwere ike ibudata ya ma jiri ya mee ihe Windows, Mac OS X ma ọ bụ Linux. Ma dabere na ọrụ onye ọrụ, ọ nwere ike mfe wuru na gburu site a FreeBSD Distro.
Ntinye na Linux
Tupu wụnye Jitsi Desktop, jide n'aka na gị Sistemụ arụmọrụ na-emeghe ma na-emeghe (GNU / Linux Distro) arụnyela Java JDK / JRE 8, ebe ọ bụ naanị na ọ na-akwado ụdị ahụ. Ọ bụrụ na, gị GNU / Linux Distro Nwere ụdị ngwugwu ndị dị na nchekwa gị, na-agba ọsọ iwu ndị a:
Y’oburu na gi Usoro njikwa na mbụ nwere a elu version, dị ka JDK / JRE 11Dị njikere ihichapụ ya tupu ma ọ bụ mgbe emechara, iji zere njehie, site na ịme iwu ndị a:
Ozugbo emechara usoro a, ị nwere ike wụnye na-agba ọsọ Jitsi na Desktọpụ. Iji wụnye ugbu a ma dịnụ na-arụ ọrụ, na-agba ọsọ iwu na-esonụ:
N'ọnọdụ nke ịchọ wụnye ya ozugbo na ebe nchekwa gị, soro ntuziaka emelitere enyere na ihe ndị a njikọ. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ibudata ngwugwu ọzọ "Jitsi-Archive-keyring_1.0.1_all.deb" pịa ọzọ njikọ.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị kpebie ịhapụ OpenJDK ma ọ bụ Java 11 arụnyere na-esote OpenJDK ma ọ bụ Java 8, cheta iji kwado na iwu ndị a Java 8 nke a na ndabara, kama Java 11:
Ma ọ bụrụ na ọ bụghị na ndabara, na niile ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ nke mbụ, igbu ndị na-esonụ nyere n'iwu iwu:
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Jitsi Desktop», ihe na-adọrọ mmasị na nke bara uru na-emepe emepe maka vidiyo na mkparịta ụka vidiyo, nke bụ onye ọrụ ntanetị desktọọpụ nke ọrụ Jitsi; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Jitsi na Desktọpụ: Oku Open Video na Egwuregwu Ngwa
NetBeans 12.2 bịarutere na nkwado maka atụmatụ ọhụrụ na Java, PHP na ndị ọzọ
JetBrains weputara oghere, ihe mmekorita nke ndi mmepe na ndi mmebe